CNC Router Atc Wooden Door Furnitures Cabinets Woodworking Carving Machine - Jinan Apex Machinery Equipment Co., Ltd.
ATC Wooden Door Furnitures Cabinets Woodworking Machines
ATC cnc router miaraka amin'ny linear auto tool changer 12 fitaovana, afaka misafidy fitaovana 10, fitaovana 8, fitaovana 6 sns.
Fanta-daza 9.0KW HSD ATC spindle, fahaizana manapaka matanjaka, tabataba ambany, fotoana maharitra.Fanamafisana hafa ao anatin'izany ny rafitra fanaraha-maso LNC Taiwan, motera servo japoney yaskawa, inverter Taiwan Detal, lalamby mpitari-dalana HIWIN, Helical rack sns.
Ny fizotry ny onjam-peo mafy, ny varavaran'ny kabinetra, ny varavarana hazo, ny varavarana hazo ara-javakanto, ny varavarana tsy misy loko, ny tsy fisian'ny rivotra, ny fizotry ny varavarankely ara-javakanto, ny milina fanadiovana kiraro, ny kabinetran'ny milina filalaovana sy ny birao, ny latabatra mahjong, ny latabatra ordinatera, ary koa ny fampiharana hafa tsy metaly sy metaly malefaka.
3 Axis 1325 hazo cnc router milina sokitra ho an'ny fanaka fanamboarana
Woodworking Industry: CNC router dia azo ampiasaina amin'ny fanaka hazo mafy, fanaka mahogany, varavarana loko MDF, varavarana hazo mivaingana, varavarana mitambatra, varavarana sy varavarankely, anilan'ny kabinetra, lamba miforitra sns.
Ny indostrian'ny dokam-barotra: CNC router dia afaka misokitra karazana famantarana rehetra, vokatra famantarana, marika, takelaka anarana, marika, fanomezana haingon-trano, embossed
Medaly, mari-pankasitrahana, fahatsiarovana, sary frame, fanaka fanaka, PVC takelaka, PCB boards (fandavahana sy sokitra), Double loko boards, acrylic sns.
Ny indostrian'ny zavakanto: Ao amin'ny hazo, volotsangana, birao organika, lovia miloko roa, kristaly ary fitaovana hafa amin'ny lamina tsara tarehy sy soratra sokitra.
Avo Configuration 6060 ATC bobongolo Aluminum sokitra milina CNC router
Mety amin'ny sokitra, fikosoham-bary ary fandavahana compactly ny fitaovana rehetra
toy ny vy, varahina, aluminium ary plastika.
Mihatra amin'ny fiara, bobongolo tsindrona, bobongolo vy ary indostrian'ny bobongolo.
Natao indrindra ho an'ny sokitra sy fikosoham-bary, solomaso, famantaranandro, tontonana, marika, marika, sary ary teny amin'ny endrika telo-dimensional sy ivelany amin'ny habeny lehibe.
Wood CNC milina fanodinana hazo automatique lathe
Wood lathe dia fitaovana afaka mamorona zavatra toy ny tohatra tohatra, famolavolana amin'ny hazo, sy ny maro hafa.
Ny lathe hazo CNC dia miasa amin'ny tontonana izay fehezin'ny mpampiasa.
Ny milina lathe dia natao ho an'ny cylindrical na conoid workpieces, ohatra andry, banister, seza seza, sns.
Mitovy ny fiasan'ny lathes rehetra.Fitaovana fidirana USB, garland manodina, lasitra iray.
Ho an'ny famokarana fanaka vita amin'ny hazo mafy, tohatra hazo matevina, andry hazo, fitoeran-jiro vita amin'ny hazo matevina, haingon-trano hazo, asa tanana vita amin'ny hazo,
toy ny fanodinkodinana fitaovana miasa.Mihatra amin'ny fanaka, tohatra, haingon-trano, orinasa mpanamboatra asa tanana hazo, sns.
Ny vokatra farany dia ahitana singa isan-karazany cylindrical miasa, vilia baolina endrika, tubular endrika sy ny fiara asa tanana hazo, toy ny isan-karazany tsanganana tohatra, tsanganana romanina, tsanganana ankapobeny, latabatra na seza tongotra, washstand, vazy hazo, latabatra hazo, baseball ramanavy, fiara hazo fanaka. , andry fandriana ho an'ny ankizy, sns.
Ampiasaina betsaka amin'ny indostria toy ny aerospace, milina fambolena, milina fananganana, fanamboarana lalamby, famokarana ascenseur, fiara fanorenana manokana, famokarana fitaovana, famokarana milina solika, milina sakafo, dokam-barotra voaravaka, serivisy fanodinana vahiny sy indostria rehetra mifandraika amin'ny famokarana mekanika.
Ho an'ny vy, aliminioma, takelaka vita amin'ny tafo, takelaka fotsy, takelaka titane ary takelaka metaly hafa.
Ny fanodinana akorandriaka amin'ny milina sy vokatra elektronika, famantarana ny dokam-barotra, asa tanana, zaridaina vy, fanamboarana fiara, fanamboarana sambo, kojakoja elektrika, fanapahana birao.
Fibre Laser Cutting Machine ho an'ny Metal/Stainless Steel/Varahina/Aluminium
Fibre Laser Cutting Equipment dia mety amin'ny fanapahana vy amin'ny Stainless Steel Sheet, Mild Steel Plate, Carbon Steel Sheet, Alloy Steel Plate, Lohataona Steel Sheet, vy Plate, Galvanized Iron, Galvanized Sheet, Aluminum Plate, Copper Sheet, Brass Sheet, Bronze Plate , Plate Volamena, Plate Volafotsy, Plate Titanium, Plate Metal, Plate Metal, Tubes sy Pipes, sns
Fibre Laser Cutting Machines dia be mpampiasa amin'ny fanamboarana Billboard, Doka, famantarana, Signage, Taratasy metaly, LED Taratasy, Kitchen Ware, dokam-barotra taratasy, Sheet Metal Processing, Metal singa sy ny ampahany, Ironware, Chassis, Racks & Cabinets Processing, Metal Crafts, Metal Art Ware, Elevator Panel fanapahana, Hardware, Auto Parts, Solomaso Frame, Electronic Parts, Nameplates, sns.